Mayelana Nathi - Shandong Huiyang Industry Co., Ltd.
I-Shandong Huiyang Industry Co., Ltd. ingumkhiqizi oqinisekisiwe we-FSC owasungulwa ngo-2003, osebenza kakhulu ocwaningweni, ekuthuthukiseni, ekukhiqizeni, ekuthengisweni nasekusezweni kwazo zonke izinhlobo zebhokisi lezinkuni, ubuciko bezinkuni, ithreyi lezinkuni, umhlobiso weholide lezinkuni kanye nefenisha yokhuni.Itholakala eJinan ngokufinyelela okulula kwezokuthutha.Sizinikezele ekulawuleni okuqinile kwekhwalithi kanye nenkonzo yamakhasimende ecabangelayo, abasebenzi bethu abanokuhlangenwe nakho bahlala betholakala ukuze baxoxe ngezidingo zakho futhi baqinisekise ukwaneliseka okugcwele kwamakhasimende.
''Ikhwalithi ephezulu wumsebenzi wethu ongaphezi.Izinqubo ezintathu zokuhlola ikhwalithi zingakuqinisekisa imikhiqizo yekhwalithi ye-premium kanye nokulethwa okusheshayo ngokukhiqiza kwayo okuphezulu nokuzinzile.
Eminyakeni yamuva, inkampani yethu yethule uchungechunge lwemishini ethuthukisiwe ehlanganisa umshini wokusaha, iplanethi ye-Cindezela, umshini wokupholisha omncane, Umshini wokucindezela, umshini wokupholisha, iplanethi ezinhlangothini ezine, isaha esiphindwe kabili, isaha yamablade amaningi, umshini wokuthunga, umshini wokuqopha we-Laser. , Umshini wokusika amaphepha, Umshini wokucindezela ukushisa, Umshini wokushisa, Umshini wokuphrinta, umshini wokucubungula i-Carton.
Ngaphezu kwalokho, sithole isitifiketi se-FSC sokuqinisekisa ukuthi zonke izinto zethu zokhuni ziyalandeleka.Siphinde sibe ne-EN71, LFGB, CARB.Isitifiketi se-FDA sokuqinisekisa ukuthi imikhiqizo yethu yezinkuni iphephile.Imikhiqizo yethu yokhuni ithengiswa kahle kulo lonke elaseShayina futhi ithunyelwa eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, eYurophu, empumalanga ephakathi, e-Asia, eNingizimu Afrika nase-Oceania!
Ithimba lethu lokuklama lisiza amaklayenti ukuthi aguqule umqondo omuhle ube ubuciko obucacile.Siklama futhi senze imfashini, ekhangayo, nemisebenzi yezandla ehlukene.
Samukela futhi ama-oda we-OEM ne-ODM.Ukuthi ukhetha umkhiqizo wamanje kukhathalogi yethu noma ufuna usizo lobunjiniyela lohlelo lwakho lokusebenza, ungakhuluma nesikhungo sethu senkonzo yamakhasimende mayelana nezidingo zakho zokuthola usizo.
Sihola imboni emisebenzini yezandla zokhuni ngaphezu kweminyaka eyishumi.Sihlinzeka ngedizayini YAMAHHALA, ukwesekwa kwe-OEM, i-MOQ ephansi, ukulethwa okusheshayo, amasampula wamahhala kanye nesevisi ye-Door to Door.
Singabahlinzeki bakho kanye nozakwethu e-China ngebhokisi lamapulangwe elisezingeni eliphezulu nemisebenzi yezandla.Siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu.Siyabonga!